Taliska AMISOM oo Madaxda Galmudug ka dalbaday in ay ilaaliyaan amaanka Cadaado. – XAMAR POST
Taliyaha Ciidanka Midowga Afrika ee AMISOM, General Cismaan Nuur Subagle ayaa Madaxda Maamulka Galmudug ee khilaafka u dhaxeeyo ka dalbaday in xiisadda u dhaxeysa aysan saameyn ku yeelan amaanka Guud ahaan Galmudug gaar ahaan magaalada Cadaado ee Xarunta KMG ah ee Galmudug.
Taliyaha ayaa sheegay in ay Cadaado u dirtay Dowlada Soomaaliya si looga hor tago qatar amni oo halkaasi ka dhalata iyo in Ciidanka AMISOM lagu wareejiyo amaanka Garoonka diyaaradaha ee magaalada Cadaado iyo meelaha kale ee muhiimka ah ee magaalada Cadaado.
“Cadaado waxaan ku nimid amar ay na siisay Dowlada Soomaaliya oo ah in aan qiimeyno xaalad amni ee deegaanka iyo in aan xaqiijino oo aan la wareegno amaanka garoonka diyaaradaha iyo meelaha kale ee muhiimka ah ee Cadaado waxaana dhawaan garoonka lagu wareejin doonaa Ciidamada AMISOM” ayuu yiri Taliyaha AMISOM ee Soomaaliya ka Howlgalaya.
Arintaan ayaa u muuqata in ay tahay talaabo ay Dowlada Soomaaliya kaga jawaabeyso Xayiraadii Madaxweynaha Galmudug uu ku soo rogay Garoonka cadaado Islamarkaana ay Galmudug ay Cadaado u diiday Mas’uuliyiin ka socday Dowlada Soomaaliya.